Ndingaita sei kuti uite Do Follow backlinks for website yangu?
Zvinouya pasina kutaura kuti pasina chinyorwa chakakonzerwa ne-backlink, hazvigoneki kuti webhusaiti itaure zvakanaka muGoogle, kana kuti inowanikwa pakati pezvitsva gumi zvekutsvakurudza. Kuchengetedza kushatiswa, kushandiswa, kana chero zvipi zvingave zvingangodaro nehuwandu hwekushandura kwayo, kutsvaga kwenyika kukuru kwave kuri kuchinja kwemakore akawanda. Nenzira iyo, Google ichapa mubairo iye zvino chaiwo, chaiwo akakodzera uye akakurumbira kumashure kumashure. Uye pasi ndichaenda kuzokuratidza dzimwe nzira dzakanakisisa dzekuita Do Do backlinks yewebsite yako. Asi zvisati zvaitika, regai nditange nemashoko matsanangudzo akajeka.
Hapana chikonzero chekutaura kuti hukama hunodhonza matamba ose eInternet pamwechete - munhu wose anoziva kuti. Asi havasi vose vari kutakura kuenzana kwakaenzana. Mukati, kune maviri maviri akasiyana-siyana ehutano - Usati Teerera uye Ita zvinotevera. Kuisa muChirungu Chisinganzwisisiki, kunoshamwaridzana neNon Follow Follow kunenge kusina zvazviri uye kusina maturo kubva mumaonero emakona makuru ekutsvaga. Izvo zvakagadzirirwa kuuya nekutengesa motokari chete. Kune rumwe rutivi, zvisinei, Ko Tevera backlinks vari kushandisa zvinyorwa zvakakosha, zvinyorwa, uye mapeji okutumira kuendesa simba reimwe webhusaiti kune imwe.
Sezviri pachena, Ko kutevera backlinks kwakaoma zvikuru kuwana, uye kazhinji ndizvo zvazviri kuti zvinofanira kuiswa newe webmaster ane unyanzvi. Uye pano tava kusvika pakupedzisira - pasi apa pane nzira dzakasiyana-siyana dzakanaka (zvisingabhadhari kana dzimwe nguva kwete) kuumba zvakakwirira Do Follow backlinks kuti nzvimbo yako yewebsite ive yakakwirira muGoogle:
Google Plus iri nzvimbo isingashamwaridzani yevanhu inogona kuve shandiso inoshamisa iyo yakashandiswa zvakanaka. Zvose zvaunoda ikoko zvinogona kuva nehupfumi yako pachako kana kunyora kwekambani itsva. Zvadaro, enda kune "chikamu" chikamu uye shandisa zvinyorwa zvayo, pamwe chete nehukuru hunoiswa iwe webhusaiti yako pakutanga. Inzwa wakasununguka kuwedzera sewandu Ita zvekutevera backlinks sezvaunoda, asi usapfuura nezvo. Kana zvisina kudaro, kuedza kwako kunogonawo kuonekwa neGoogle se spam kana kushandiswa.
Kuregererwa ibasa rekare rakanaka rakandibatsira neRokutevera kumashure kwemakore achangopfuura. Ingorinyoresa kuti uwane mharidzo yakakosha, uye unzwe wakasununguka kuwana iyo webhusaiti yose uye sarudza chikamu chaunoda.
Dmoz isiriwo nzvimbo yekare, iyo inonyanya kubata nehurumende zvinyorwa zvechinangwa-chizvarwa chezvinangwa. Zvose zvaunoda paDmoz ndekusarudza chikamu chakanaka chakakosha panyaya huru yewebsite yako kana blog. Pakati pezvikamu zvaro zvakasiyana, ndinokurudzira kushandisa chinyorwa ichi kuti uwane zvakanakisisa zvinyorwa zvakagadzirwa nevanoshamwaridzana navo kuti vashandise ivo pachavo.
Simbisa nzvimbo yakanaka kuti uwane zvimwe zvaunotevera Tevera backlinks - kubva pakupindura. Ingoita zvinyorwa zvitsva uye ramba uchiita "chikamu chekupisa" chikamu. Nenzira iyo, iwe uchakwanisa kunakidzwa nekukwirira kwemashure maviri e-backlink pane imwe nhoroondo.
Pashure pezvose, unogona kubhadhara kushanyira paTrll. co uye sarudza severlinks dzakawanda kuti uwedzere kumira kwako sezvaunoda. Uyezve, izvozvo hazvingatori mari yako - basa racho rakasununguka. Kuita kudaro, nyora zvakare zvakare-usapfurikidza nere backlink count yako uye zvisikwa zvavo zvakakurumidza. Kana zvisina kudaro, iwe uchasimudza mutsvuku mutsvuku unodana Google kuti ive chidziro chekudzivirira Source .